Iindaba - Isifo seCoronavirus (i-COVID-19) ingcebiso kuluntu, Ungazikhusela njani kunye nabanye kwi-COVID-19
Ingcebiso ngesifo seCoronavirus (COVID-19) eluntwini, Ungazikhusela njani kunye nabanye kwi-COVID-19
Gcina umgama ongama-1 yemitha ubuncinci ukunciphisa umngcipheko wosulelo xa abanye bakhohlela, bathimla okanye bethetha. Xa ungaphakathi, gcina umgama omkhulu kwabanye. Ukuya kude umgama, kokukhona kungcono.
* Yenza ukunxiba imaski njengenxalenye eqhelekileyo yokuba phakathi kwabanye abantu.
Oku kulandelayo lulwazi olusisiseko lokunxiba imaski:
(1) Ndifuna nini ukunxiba imaski?
Kwiindawo zikawonke-wonke (ezinjengeevenkile ezinkulu, iivenkile ezinkulu, izibhedlele, iikhemesti, iindawo zokuzilolonga, njl.njl.); ukuthatha izithuthi zikawonkewonke; imisebenzi yenkonzo yangaphandle (njengabasebenzi baseofisini, abasebenza edesikeni ngaphambili); kubanjwa iintlanganiso zamaqela; iindawo ezivaliweyo ezinjengeeofisi ezinabantu abaninzi.
(2) Uyikhetha njani imaski?
Ngokubanzi, sebenzisa iimaski zonyango ezilahlwayo. Iimaski zomqhaphu kunye nezipeki azikhuthazwa. Kwiindawo ezixineneyo nezixineneyo (ezinje ngeevenkile ezinkulu, iibhasi, iindlela zangaphantsi, kunye neenqwelo moya), nxiba iimaski zonyango ezilahlwayo uze uzitshintshe kangangeeyure ezi-2 ukuya kwezi-4, uphinde uzibuyisele kwangoko emva kokungcola okanye ukufuma; kubantu abasesichengeni esiphezulu, Umzekelo, abasebenzi bezonyango abasebenza kwisebe likaxakeka, oogqirha bezempilo boluntu abaqhuba uphando lwezifo zonxibelelwano olusondeleyo, banokusebenzisa iimaski zokhuselo zonyango ezisezantsi ze-N95, bazinxibe ngokuqhubekayo kangangeeyure ezi-4, kwaye bazitshintshe kwangoko emva kongcoliseko okanye ukufuma.
(3) Ungazisebenzisa njani iimaski ngokuchanekileyo?
Hlamba izandla zakho phambi kokuba unxibe imaski; icala leklip yeempumlo liphezulu kwaye icala elimnyama lijonge ngaphandle; tyhila isitaki uze ulungise imaski ebusweni ngezandla zakho ukogquma umlomo, impumlo, nesilevu; tsala imitya yeendlebe ngasemva kweendlebe kwaye uhlengahlengise ukuqina kwemitya yeendlebe, phantsi kwesiseko sokungabangeli intloko nobuso ukungonwabi, imitya kufuneka itsalwe iye koyena uqinileyo; beka iincam zeminwe yakho ecaleni kwesinyithi sebhulorho yempumlo, ucofe kancinci ungene ngaphakathi ukusuka embindini ukuya emacaleni, ide isondele kwibhulorho yempumlo; Lungisa imaski ngokufanelekileyo ukuze ubume bemaski buhambelane ngokupheleleyo nobuso.
Ngexesha lobhubhane, sisabambelele kwizithuba zethu. Isebe lolawulo libulala iintsholongwane eofisini yonke imihla. Wonke umntu onxibe imaski ukusebenza yonke imihla. Iqela lebhulorho lithumele iimaski zasimahla kumhlobo osweleyo. Ngexesha likaFebruwari, sathumela ngaphezulu kweemaski ezingama-100000 kubathengi bethu.
HLALA UKHUSELEKILE UZE UQINILE.
Ukuba wena kunye nosapho lwakho nifuna iimaski, nceda unxibelelane nenkonzo yethu yabathengi kwaye unikezele ngolwazi lweedilesi, siya kuzithumela kuwe simahla kwangoko.